2012 December | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
ကျော်ဟုန်း ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ မော်လမြိုင် စာရေးဆရာများအသင်းနဲ့စာပေမြတ်နိုးသူများက စုပေါင်းကျင်းပတဲ့ စာဆိုတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို မောင်ငံရပ်မှာတည်ရှိတဲ့ ( မဟာမြိုင်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်) ဝန်းအတွင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၂၆)မှ(၃၀)ရက်အထိ...
ကျော်ဟုန်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ ပညာရေးကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုဟာ (၂) နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ပညာရေးကွန်ယက် (၂) နှစ်ပြည့် အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းများရံပုံငွေပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ ဒီဇင်ဘာ...
ဂျော်ဒီး ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ ဒီနေ့ ..ဂျီးဒေါ် တို့ရွာမှာ ရွာကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးဖို့ စိုင်းပြင်နေကြသည်..။ ရွာဂံတော်သမဒကြီးရဲ့  တတိယအဆင့် မဲပြာပုဆိုး..မဟာ အပြောင်းအလည်း ဗျုဟာကြီးအရ..ဒီမိုကရေစီ ရွာဂံတော် တပတ်ရစ်ကြီးကို...
ကာတွန်း – အိုကေလင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂
ကမာပုလဲ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၁ တစုံတယောက်ဟာ မင့်နှလုံးသားထဲ ပျော်ဝင်ရှင်သန်နေခဲ့ သံသယနဲ့ ငဲ့မကြည့်နဲ့ကွယ် …။ မင့်အသက်ရှိုက်သံမှာ သူ့ရင် … လှိုင်းတို့တဖျပ်ဖျပ် စီးဝင်လာတဲ့ မြစ်တစင်းပေါ် … သူ့အသက်လှေ။ ညကို...
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ခရိုနီတွေ ပျက်ကျတဲ့ နှစ်လေလား ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂
ပန်းတနော်သား၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ဒီသတင်းလေးကိုဖတ်ရလို့ စာရေးလိုက်ပါတယ်. ပြီးတော့လဲဧရာဝတီတိုင်းထဲကဆိုတော့ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်. အခုကဒေးဒရဲတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး ဆီမှောင်ခိုလုပ်တာ. ပန်းတနော်မြို့ အရှေပိုင်းက ဒေါင့်ကြီး ကျေးရွာမှာ ဆီမှောင်ခို လုပ်နေတဲ့ ဦးမြင့်ထူးက ပန်းတနော်မြို့ မှာနာမည်ကြီးနေတာကြာပါပြီ။ သူလုပ်လာခဲ့တာ အခုဆိုရင်...
တခွန်းချန်သာဓု အရှင်ကောင်း (ရွှေဝါရောင်)။ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ တခုသောမင်းဘဝ၊ ရထားစွန်းနှင့် မုဆိုးမတစ်ဦး၏အိမ်ကို တိုက်မိရာ၊ အိမ်သစ်ယာသစ်ဖြင့် အစားပေးခဲ့ သော်ငြား စိတ်ကိုထိခိုက်စေ၊ သူတပါးသိုက်အုံကို ပျက်စီးစေသည့်ကံကြောင့် ငရဲကြီးစွာ လားရရှာသတဲ့။ ထိုသံဝေဂနှင့်...
အမာရီလိုမြို့ ဇေယျသုခ ကျောင်းတိုက် ( ၆ ) နှစ်မြောက် မိုးမခအထောက်တော် (အမရီလို)၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဖက်ခြမ်း တက္ကဆက်ပြည်နယ် အမာရီလိုမြို့ ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ မြန်မာထေရ၀ါဒ...
ဟင်္သာတမြို့နယ်က ပြည်သူတွေရဲ့ အသံများ ဟင်္သာက ပေးစာများ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂ လာဘ်စားသူ ဈေးခေါင်းကို ရာထူးပြန်ခန့်တဲ့ ဌေးဝင်းဈေး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ ဌေးဝင်းဈေးရှိ ဈေးခေါင်း ဦးမြင့်ဦးသည် ဈေးသူဈေးသားများ၏ ဈေးအခွန်ငွေများ၊...
ဆောင်းလူ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ သူ့ရဲ့ ဤအိမ်ပြန်ခရီး မျက်ရည်မြစ် စီးကြောင်းတလျှောက် မီးခိုးတွေ အုန်းအုန်းထ သံလွင်ရွက်ကလေး နွမ်း ချိုးငှက်ခမျာ အနာတရ …။ဝေးကွာခဲ့သူတွေကို ပြန်ဆုံခဲ့စေသည့် နှစ် …။ ဒုက္ခနဲ့...
ကာတွန်း – လိုင်လုဏ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂
ပေးပို့သူ – ဇော်သူရ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂
ဦးနန္ဒဝံသ (ကာရိုလိုင်းနား) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ ဠင်းတ အတောင်နဲ့ ခရီးသွား အကောင်ပုပ်များ တွေ့ ရင် ရွေတိဂုံတွင်မက သင့်အိမ်ဝင်းအတွင်းပင် ကျလိမ့်။ ဘယ်နေရာကျကျ အချိန်ကုန်ကာ နိမိတ်တွေ ရှာမနေကြနဲ...
ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ ၁.၁.၂၀၀၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သော နာရေးညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) တည်ထောင် ခြင်း (၁၂) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားအား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ...
မောင်လူဝေး ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်ကတော့ နှစ်ဆယ့်တနှစ်တာ မလေးရှား မှာ နှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများဘ၀အကြောင်း ဆောင်းပါး အပိုင်း (၁) ကိုရေးပြီး ကျနော့်ဆီကို ဆက်ရေးဖို့တိုက်တွန်းကြတဲ့အီးမေးလ်တွေနဲ့ ကွန့်မန့်လေးတွေဖတ်ရတော့ ကိုယ့်တွေ့ခံစားနေရသူတွေများသားပဲလို့လည်း တွေးမိရင်း...
ချမ်းမြ (မိုးမခအထောက်တော်) ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွေှ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအားလုံးယာယီပတ်စပို့လုပ်ကြဖို့၂၀၁၂ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နောက်ဆုံးအဖြစ်ကြေညာခဲ့ သည်။ မြန်မာသမ္မတနှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ (၃) လထပ်တိုးရန်သဘောတူခဲ့သော်လည်း ထိုင်းလ၀ကနဲ့...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ကာတွန်းဆရာလည်း ပါးစပ်နဲ့ပါ ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂